Amniga Android: ku ilaali mobilkaaga ama kaniiniga talooyinkaan | Androidsis (Bogga 2)
Facebook ayaa ku weydiin doonta inaad fiidiyoow wejigaaga ah ku duubato
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cabirka Facebook uu soo bandhigi doono si loo go'aamiyo haddii aad runti tahay cidda aad sheegaysid iyo in aadan aheyn bot.
Soo ogow sida aan u arki karno haddii qof uu soo galay akoonkeena Facebook mar uun annaga oo aan fasax naga haysan.
Sida loo arko shirkadaha galaangalka xogtaada barta Instagram
Raadi wax badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee 'Instagram' ee kuu oggolaanaya inaad xakameyso shirkadaha ay marin u heli karaan macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Sida loo ogaado haddii qof soo galay koontadaada 'Instagram'
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan raacno si aad u awoodo inaad aragto haddii qof uu soo galay akoonkeena 'Instagram' iyada oo aan ogolaansho naga helin waqti uun.
Google ayaa ku ogeysiin doonta haddii furayaasha sirta ah ay waxyeelleeyaan ama aysan ammaan ahayn
Raadi wax badan oo ku saabsan astaantan cusub ee Google ee noo sheegaysa haddii lambarka sirta ahi uu sugan yahay iyo in kale iyo waxa aan ku horumarin karno.
Jebinta amniga ee barta Instagram! Xogta shakhsiga ah ee adeegsadayaasha la kashifay
Raadi wax badan oo ku saabsan jebinta amniga cusub ee barta 'Instagram' ee soo bandhigtay xogta isticmaalaha oo leh lambar taleefan ama emayl.
Midkamid ah wicitaanada ugufiican barnaamijkaaga 'Android' BRUTAL !!
Wicitaan Wanaagsan oo leh shaqooyin aad waxtar u leh amniga iyo asturnaanta taleefannadeenna casriga iyo lambarka taleefanka.
Google ayaa lacag bixin doonta si ay uga hesho cilladaha barnaamijyada Google Play
Ka ogow wax badan oo ku saabsan fikraddan Google ee bixin doonta lacag si loogu helo khaladaadka ku jira codsiyada Google Play si loo wanaajiyo tayada iyo amniga.
Google Chrome ayaa kula socodsiin doonta haddii furahaaga sirta ah uu xaday
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan aaladda cusub ee Google Chrome oo kugu soo wargelin doonta haddii lambarkaaga sirta ah ee internetka laga sii daayo.
Ogow wax badan oo ku saabsan halista la soo ogaaday sababo la xiriira qaar ka mid ah nuqulada FaceApp oo ay ku jiraan furin iyo xayeysiis gudaha ah.
Raadi wax badan oo ku saabsan sida looga saaro marinka koontadaada Google taleefankaagii hore ee Android si looga fogaado arrimaha amniga.
Sida loo ogaado haddii dalabyadaadu ammaan yihiin
Soo ogow aaladda ugu fiican ee aad ku ogaan karto haddii barnaamijyada aad ku haysato taleefankaaga Android ay ammaan yihiin oo ka fogow dhibaatooyinka noocaas ah.
Google Play wuxuu tirtirayaa toddobo codsi oo dadka basaasay
Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan laga saaray Google Play Store maxaa yeelay waxay u heellanaayeen dhibaateynta dadka isticmaala Android.
Shaqaalaha Google waxay dhagaystaan ​​codadka ay soo ururiyeen Google Assistant iyo Google Home
Raadi wax badan oo ku saabsan Google Home iyo maqalka Kaaliyaha Google ee ay shaqaalaha Google dhagaysan karaan oo ay ku yeelan karaan xog shaqsiyeed.
Daraasad ayaa lagu ogaaday in ka badan 2.000 oo barnaamijyo been abuur ah oo ku jira Google Play
Raadi wax badan oo ku saabsan daraasaddan oo lagu ogaaday in ay jiraan in ka badan 2.000 oo barnaamijyo been abuur ah oo ku jira Google Play maanta oo aan dhammaantood laga saarin.
Waxaan kuu sheegeynaa sida aad ugu xiri karto WhatsApp lambarka sirta ah ama qufulka faraha. Barnaamijyada ugu wanaagsan iyo qaababka loo ilaaliyo wada sheekaysigaaga.
Yurub waxay ku sharraxeysaa sameynta liiska alaab-qeybiyeyaasha 5G
Raadi wax badan oo ku saabsan liiska madow ee lagu diyaarin doono Yurub si looga hortago shirkadaha qaar inay ka shaqeeyaan horumarinta 5G.
BARNAAMIJKA ANDROID !!: BeiTaAd, oo ah adware ku qarsoon 238 barnaamij oo ku jira Google Play
Soo ogow wax walba oo ku saabsan adware-ka BeiTaAd ee ku jiray 238 codsi oo ku jira Google Play isla markaana la soo dejiyey 440 milyan oo jeer.
WhatsApp mar dambe kuu oggolaan meyso inaad keydiso sawirrada astaanta ah ee dadka aad la xiriirto. Runtii?
Tani run miyay tahay inaad garwaaqsatay in WhatsApp mar dambe kuu oggolaan doonin inaad keydiso sawirrada astaanta ah ee dadka aad la xiriirto ama, ma jirtaa hab lagu dhaafo ilaalintaan?
Google wuxuu cusbooneysiiyaa siyaasadaha daabacaadda ee Google Play
Soo ogow sharciyada cusub ee lagu soo bandhigay siyaasadaha daabacaadda ee Google Play oo hadda si rasmi ah u dhaqan galaya.
Facebook ayaa sanadkan ka saartay 2.000 bilyan akoonno been abuur ah
Soo ogow tirada tirada badan ee akoonnada beenta ah ee ay Facebook ka saartay illaa iyo sannadkan iyo cawaaqibka ay arrintan ku yeelanayso iyada.
Sida looga saaro PIN-ka kaarkaaga PIN-ka 'Android'
Soo ogow talaabooyinka si aad uga tirtirto lambarka PIN-ka kaarkaaga SIM-ka ee ku yaal Android oo sidaas darteed maahan inaad geliso markii aad taleefanka gasho.
Sida loo ilaaliyo WiFi-gaaga si aan cidi u galin shabakadaada
Soo ogow talooyinka kala duwan ee aan xisaabta ku darsan karno marka aan ka ilaalineyno WiFi-ga gurigeenna weerarada ama ku soo xadgudubka.
Dhammaan isbeddelada asturnaanta waxaa lagu soo bandhigay Google I / O 2019
Soo ogow dhammaan isbeddelada iman doona berrinka asturnaanta ee Android wax yar, oo si rasmi ah loogu soo bandhigo Google I / O 2019.
Lix barnaamij ayaa laga saaray Google Play khayaanada xayeysiinta
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan lixdaan barnaamij ee laga saaray Google Play ee looga saaray khayaanada ad.
Google Play ayaa shaqaaleysiin doonta shaqaale badan si ay dib ugu eegaan codsiyada
Ka ogow wax badan oo ku saabsan tallaabooyinka Google Play uu ku qaadanayo si habka dib u eegista abku u noqdo mid jilicsan.
Google waxay daabacdaa 2018 warbixinta amniga Android
Raadi wax badan oo ku saabsan warbixinta amniga Android ee 2018 ee Google horeyba u daabacday si rasmi ah waxayna noo ogolaaneysaa inaan aragno xogtaan.
Firefox Lockbox: Maamulaha sirta ee Mozilla wuxuu yimaadaa Android
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan daahfurka Firefox Lockbox, maareeyaha furaha cusub ee Mozilla ayaa si rasmi ah uga bilaabay Android.
Kaliya 10% antivirus on Android ayaa ogaada dhammaan barnaamijyada xun
Ka ogow wax dheeraad ah oo ku saabsan daraasaddan ku saabsan barnaamijka 'Android' kaas oo lagu qiimeeyay heerka ogaanshaha antivirus-ka ugu caansan suuqa.
Amniga Android: Dhammaan wixii ku saabsan rukhsadaha rukhsadda, siinta ama aan loo bixin?
Waxaan ka hadleynaa amniga Android ee ku saabsan rukhsadaha rukhsadda iyo goorta la siinayo ama aan la siinin tusaalooyin wax ku ool ah oo leh laba barnaamij oo ay tahay inaadan ka maqnaan.
Sidee Google Play gacan uga gaystay hagaajinta amniga hal milyan oo barnaamij
Raadi wax badan oo ku saabsan tallaabooyinka Google Play uu qaaday si loo hagaajiyo amniga in ka badan hal milyan oo barnaamijyo ah.
Sida loo demiyo barta uu ku yaal Facebook
Soo ogow talaabooyinka la raacayo si aad u hawlgeliso barta ku taal asalka Facebook taas oo ka hortageysa inay arkaan goobta haddii aynaan adeegsan barnaamijka.
Waad ku mahadsan tahay shahaadada cusub ee FIDO ee ay heshay nidaamka hawlgalka Android, si dhakhso leh uma baahnid inaad xusuusato furayaashaada oo dhan.
Dejinta Google Play, dhammaan dejimaha ay tahay inaad ogaato
Waxaan ku tusayaa goobaha muhiimka ah ee Google Playh ee qof kasta oo adeegsada Android ah uu ogaado inuu ilaaliyo akoonkooda iyo aaladaha ay ku shaqeeyaan.
Sida loo ogaado barnaamijyada dirista xayeysiiska pop-up ama pop-up ee mobilkaaga Android
Kuwaas oo gebi ahaanba xayeysiis ah oo xayeysiis ah ayaa loo diraa barnaamijyada aan rakibno. Waxaan ku baraynaa sida ugu fudud ee lagu ogaan karo.
Aaway taleefankayga gacanta?
Aaway moobilkaygii? Haddii aad naftaada weydiisay su'aashaas in ka badan hal jeer, dalabka aan kugula talinayo adiga ayaa hubaal ah inuu noqon doono gargaar weyn.
Adiantum: Sirta cusub ee dhamaadka-dhamaadka ku saabsan Android
Ka ogow wax badan oo ku saabsan Adiantum, sirta cusub ee Google ee loogu talagalay dhammaadka hoose ee Android oo horeyba si rasmi ah loogu bilaabay suuqa.
Sida looga dhigo taleefankeena Android mid amaan ah, sida ay sheegtay Google
Kala soo bax shantan tilmaam Google oo naga caawin doona inaan helno taleefan aad u ammaan badan oo Android ah si fudud.
Qalabka 'Camera Stick Up Cam Camera' cusub ee loo yaqaan 'Ring's New Camera Cam Camera' oo la jaan qaadaya Alexa
Kaamirada loo yaqaan 'Ring Stick Up Cam' waa nooc cusub oo ay soo saartay shirkadda soo saarta ee Amazon, kaas oo ay noo diyaarinayso kaas oo ku habboon gudaha iyo dibedda.
Barnaamijyada Kaamirada Xatooyada Sawirka: Malware-ga cusub ee Google Play
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan khayaanadan cusub ee lagu arkay Google Play barnaamijyada kaamirooyinka horayna si rasmi ah looga saaray.
Sida looga fogaado khayaanada ama malware-ga WhatsApp
Raadi wax badan oo ku saabsan sida khiyaanooyinka WhatsApp ama fayrasyada si fudud loogu aqoonsan karo taleefankaaga Android.
Ma taqaanaa sida loo kala sooco emaylka been abuurka ah iyo midka la isku halleyn karo? Ka ogow Google
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ciyaartan ay Google ku abuurtay taas oo aad si fudud ugu aqoonsan karto emayllada been-abuurka ah ee gaadhay email-kaaga
Sida loo password loo ilaaliyo barnaamijyada iyo faylasha ku jira Android
Soo ogow sida loo awoodi karo inaad ku ilaaliso barnaamijyadaada 'Android' lambarka sirta ah mahadnaqa AppLock, oo ah barnaamij loogu talagalay.
Google Play ayaa meesha ka saaraya 85 barnaamij oo been abuur ah oo kaliya soo bandhigay xayeysiis
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan 85 barnaamijyadan been abuurka ah ee laga saaray Google Play maxaa yeelay waxaa loogu talagalay inay soo bandhigaan kaliya xayeysiiska.
Sida loo falanqeeyo khayaanada ku jirta Android-ka ee leh "Play Protect"
Raadi wax badan oo ku saabsan sida loo iskaan barnaamijyada aad ku rakibtay taleefankaaga Android ee loogu talagalay khayaanada adoo adeegsanaya Google Play Protect.
Sida virus looga saaro taleefankaaga Android
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka aan ku heli karno Android si aad ugu awooddo inaad virus uga baabi'iso taleefankeena. Habab kala duwan ayaa la heli karaa.
Sida loo abuuro nuqul gacanta ah ee Android illaa Google Drive
Soo ogow sida aan ugu samayn karno gacan-qabashada taleefankayaga Android oo ku kaydi Google Drive.
Barnaamijyada xaasidnimada leh ee iska dhigaya ciyaaro ayaa laga saaray Play Store
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan xun ee ku soo dhex dhuuntay Play Store oo lahaa wax ka badan 500.000 oo soo dejin guud ahaan.
Gaarka ah ee Huawei: Sida loogu kaydiyo tallaabo tallaabo tallaabo 'Pendrive' ah
Sida loo ogaado haddii aad hayso barnaamijyo xaasidnimo ah taleefankaaga Android
Soo ogow sida aad ku ogaan kartid haddii aad hayso barnaamij xaasidnimo ah oo ku saabsan taleefankaaga Android iyo tallaabooyinka aad ku raaceyso kiiskaas.
Google waxay ku daabacdaa warbixinta cusub ee amniga Android
Raadi wax badan oo ku saabsan warbixintan amniga ee Google ay ku daabacday xaaladda amniga Android maanta.
Nofeembar cusbooneysiinta amniga ee Galaxy Note 8 ayaa hadda la heli karaa
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa hadda sii deysay cusboonaysiinta amniga ee u dhiganta bisha Nofembar Samsung Galaxy Note 8.
Google wuxuu ka takhalusaa furitaanka codka Android sida amaan darro
Waxay ku jireen Pixel 3 halkaas oo laga helay hawl cusub oo beddelaysa furitaanka codka. Dhawaan waxay imaan doontaa nooca cusub ee Google.
Cusboonaysiinta amniga Oktoobar ee Galaxy Note 8 hadda waa la heli karaa
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa bilowday inay soo rogto cusbooneysiinta amniga ee u dhiganta bisha Oktoobar 2018 ee Xusuusin 8
30 milyan oo akoon oo ay saameeyeen jabsigii Facebook. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dhibaatada amniga shabakadda bulshada ee aadka loo isticmaalo.
Ku dhowaad 50 milyan oo xisaabaadka Facebook ayaa halis la gelinayaa sababo la xiriira khalkhal amni
Xadgudub lagu sameeyay amniga Facebook ayaa halis galiyay ku dhowaad 50 milyan oo akoonnada isticmaalaha ah, sida ay sheegtay shirkadda.
Goorma ayeynu ku qasban nahay inaanu qaabeyno taleefankeena Android?
Markay fiicantahay inaad qaabeyso taleefankeena Android. Soo ogow xaaladaha ay kugula talineyso inaad qaabeyso taleefankaaga Android.
Sida loo ogaado barnaamijyada ku saabsan xogta miiraha Android
Sida loo xakameeyo haddii barnaamijyada Android ay daadiyaan xogta. Baro tilmaamahan si aad u hagaajiso asturnaanta taleefankaaga iyo barnaamijyadaada.
Waa maxay VPN maxaase loogu talagalay?
Waa maxay, sidee u shaqaysaa iyo maxaa VPN loogu talagalay? Raadi wax badan oo ku saabsan waxa VPN yahay iyo waxa aan ugu isticmaali karno Android, marka lagu daro kuwa ugu fiican halkaas.
Android waxay bixisay $ 3 milyan oo abaalmarin ah markay ogaatay cilladaha
Android waxay bixisaa $ 3 milyan si loo ogaado cilladaha amniga. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijka abaalmarinta shirkadda.
Waxaan tijaabineynaa nambarka CSS ee jabiya dhammaan iphone-yada iyo iPad-yada waana tan dhacdaa
Maxay yihiin rukhsadaha ay codsiyada na weydiiyaan Android?
Maxay yihiin rukhsadaha ay codsadaan codsiyada ku saabsan Android. Soo ogow rukhsadaha ugu badan ee Android iyo sida loo maareeyo.
Tor Browser ayaa ugu dambeyntii laga bilaabay Play Store
Tor Browser wuxuu si rasmi ah ugu yimid Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka biraawsarkan taleefannada Android ee horey ugu jiray Bakhaarka Play Store.
Ogaaday nuglaansho u oggolaaneysa raadinta taleefan kasta oo aan cusbooneysiinin Android 9.0 Pie
Dayacnaanta ayaa u oggolaaneysa raadinta taleefannada aan lagu cusbooneysiinin Android Pie. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cilladdan amniga ee lagu arkay Android.
Codsiyada amniga ugu fiican ee loogu talagalay Android
Shanta barnaamij ee ugu fiican amniga ee loogu talagalay Android. Baro xulashadaan barnaamijyada amniga ee Dukaanka Play.
Nokia ayaa xayiray bootloader-ka cusbooneysiintii ugu dambeysay ee amniga
Dhowr sano ka hor, qaar badani waxay ahaayeen adeegsadayaal u heellan rakibidda ROM-ga caadada ah si ay uga faa'iideystaan ​​saldhigyadooda iyadoo ay ugu wacan tahay cusboonaysiinta amniga ee ugu dambeysay ee ay Nokia sii deysay, waxay xannibaysaa suurtagalnimada in la furo bootloader-ka koontoroolladooda, a go'aanka aad qaadatay adigoon horay u shaacin.
Android One waxay lahaan doontaa cusbooneysiin nabadgelyo bille ah
Telefoonada loo yaqaan "Android One" waxay yeelan doonaan cusbooneysiin amni bille ah. Raadi wax badan oo ku saabsan inta jeer ee cusbooneysiintan.
Sacab loo tumay Samsung: dhamaadka-sare waxay heshay balastarka amniga bil kasta sannad dhan
Waa in aynaan ku faraxsanayn warkan, maxaa yeelay waa wax loo baahan yahay soo saare kasta, laakiin maqnaansho badan awgeed, waxaan ku muujineynaa Galaxy S8 / S9.
Galaxy Note 8 waxay heleysaa balastarka amniga Ogosto
Shaashadda amniga ee Ogosto ayaa imaaneysa Galaxy Note 8. Ka ogow balastarka ku dhacaya Samsung dhamaadka-maalmahan.
Heshiiska udhaxeeya Google iyo WhatsApp: nuqulada keydka ah looma tirin doono sidii booskii loogu adeegsaday Google Drive
Waad ku mahadsan tahay heshiiska cusub ee u dhexeeya WhatsApp iyo Google, nuqullada keydka ah ee akoonkaaga WhatsApp laguma tirin doono koontadaada Google Drive.
Chrome 68 waxay horey u muujisay bogag aan HTTPS aheyn kuwo aan amaan aheyn
Google Chrome 68 wuxuu muujinayaa bogag aan HTTPS ahayn kuwo aan amni ahayn. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta biraawsarka Android.
OnePlus 3 iyo 3T July Cusboonaysiinta Amniga ayaa lasoo saaray
OnePlus ayaa u cusbooneysiisay cusbooneysiin cusub OnePlus 3 iyo 3T, labada calan ee shirkadda aabbeheed, taas oo la imanaysa OnePlus patch ayaa soo saartay cusboonaysiinta amniga ee u dhiganta bisha Luulyo ee OnePlus 3 iyo 3T oo ay weheliso dhowr horumar oo yaryar .
Samsung Galaxy Note 5 wuxuu helayaa cusbooneysiinta amniga ee July 2018
In kasta oo boosteejooyinka qaarkood ay in muddo ah suuqa joogeen, haddana soo saarayaasha qaarkood, oo ay ku jiraan Samsung, ayaan gebi ahaanba iloobin shirkadda Kuuriya ee Samsung ay hadda bilaabeen inay soo saaraan cusboonaysiinta amniga ee Samsung Galaxy Note 5.
WhatsApp ayaa kuu digi doonta haddii ay kuu soo diraan xiriiriyeyaal khatar ah
WhatsApp ayaa kaaga digi doona xiriiriyeyaasha laga shakiyo. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee been abuurka been abuurka ah ee imanaya abka.
Barnaamijka LaLiga wuxuu basaasaa baararka iyagoo isticmaalaya makarafoonka taleefanka
Barnaamijka LaLiga wuxuu ku weydiisanayaa rukhsad inuu isticmaalo makarafoonka taleefanka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan rukhsadaha cusub ee muranku ka dhashay ee uu codsaday barnaamijka.
Cusbooneysiinta amniga ee ugu dambeysay ee Galaxy S9 iyo S9 + waxay noo ogolaaneysaa inaan duubo wicitaanada
Cusbooneysiinta amniga ee ugu dambeysay ee Galaxy S9 iyo Galaxy S9 + waxay dhaqaajineysaa shaqada noo oggolaaneysa inaan duubno taleefannada aan sameyno.
Wajiga furitaanka barnaamijka oo lagu daray cod
Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa wanaagga iyo xumaanta labadaba, fikradda ah furitaanka wajiga codsi ka cod badan kan runta ayaa u muuqda mid ka xiiso badan
Google waxaa laga baaray Australia dhibaato ka jirta Android
Google waxay ku baartay Australia iibinta xogta isticmaale ee Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cilmi baarista ay shirkaddu wajahayso qaabkeeda ganacsi.
Google ayaa qasab ka dhigi doonta balastarrada amniga
Google ayaa ka dhigeysa bixinta balastarrada amniga mid qasab ah. Raadi wax badan oo ku saabsan tallaabada cusub ee shirkadda si loo ilaaliyo inta isticmaaleyaasha ah intii suurtagal ah.
Haddii aad raadineyso codsi wanaagsan oo aad ku xakameyso asturnaanta Android-kaaga iyo barnaamijyadaada rakiban oo aadan ku qanacsaneyn App Lock fudud, waxaan hubaa inaad jeclaan doonto barnaamijkan.
Google waxay ku bixisay 2,9 milyan oo doolar dayacanka la helay
Google waxay $ 2,9 milyan ka bixisay dayacanka la helay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan lacagaha ay shirkaddu ku bixisay helitaanka cayayaanka.
Bitdefender: Ultimate Antivirus ee loogu talagalay Android
Bitdefender Security Security: Fayraska ugu fiican ee loogu talagay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan antivirus-kan iyo aaladda ilaalinta ee loogu talagalay Android. Waxa ugu fiican ee aan heli karno maanta.
Tabaha lagu hagaajinayo arimaha gaarka ah ee Android
6 tabaha fudud si loo hagaajiyo arimaha gaarka ah ee Android. Soo ogow xeeladahan aad ku hagaajin karto asturnaanta xogtaada qalabkaaga Android.
In ka badan 700.000 barnaamijyo xun xun ayaa laga saaray Google Play mahadnaqid AI
700.000 barnaamijyo xun xun ayaa laga saaray Google Play sanadkii 2017. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan shaqada amniga ee ay Google qabatay sanadkii hore.
Google Chrome 64 ayaa xannibi doona xayeysiiska kugu hagaya bogagga kale
Google Chrome 64 ayaa xannibi doona xayeysiiska kugu hagaya bogagga kale. Raadi wax badan oo ku saabsan waxa ku cusub Chrome 64.
Adigoo adeegsanaya Android O waxaad ku horumarin doontaa xaqiijinta barnaamijyada iyo adeegyada adoo adeegsanaya SMS
Android O ayaa fududeyn doonta isla markaana dedejin doonta nidaamka xaqiijinta aqoonsiga iyadoo la adeegsanaayo lambarka SMS ee codsiyada iyo adeegyada
Digniinta Android!, Waa maxay ransomware iyo sida looga hortago?
Waxaan kuu sharaxeynaa waxa Ransomware yahay, sida ay u saameyn karto Android-kaaga iyo waxaad sameyn karto si aad uga nabad gasho kana badbaado khayaanadan halista ah
Hal sano oo Netflix ah bilaash? Khiyaanada cusub ee ku dhex wareegeysa WhatsApp
Booliska Qaranka ayaa ka digay isku day cusub oo khiyaano ah iyada oo loo marayo WhatsApp iyada oo la siinayo bilaash Netflix ah muddo hal sano ah
Dunida oo dhan waxay heegan ugu jirtaa ciyaartan halista ah ee halista ah ee nibiriga buluugga ah ee saameynaya kumanaan dhalinyaro ah oo daafaha adduunka ah.
In ka badan 400 oo barnaamij oo ka socda Play Store ayaa ah kuwo aad u nugul
In ka badan afar boqol oo codsi ayaa laga helay Play Store-ka loogu talagalay Android kuwaas oo u nugul weerarada khayaanada iyo xatooyada xogta
Sida loo baaro Apk-gaaga cudurada suuragalka ah
Casharradan cusub ee wax ku oolka ah ee talobixinta, waxaan ku bari doonaa inaad falanqeyso apk-gaaga si aad u raadiso caabuq suuragal ah, fayras ama malware.
The barnaamijyadooda gurmad Android ugu fiican
Maanta barnaamijka 'Androidsis' waxaan kuu soo jeedineynaa xulasho leh qaar ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan si nuqullo nuqul ah looga sameeyo boosteejadaada 'Android'
Google ayaa dukaanka Play Store ka saaraysa barnaamijka "Cusboonaysiinta Nidaamka" ee been abuurka ah
Google ayaa barnaamijka Cusbooneysiinta Cusboonaysiinta kala baxday Play Store maxaa yeelay dhab ahaantii basaasnimo horey loogu soo dejiyey malaayiin jeer
Spy app oo balan qaaday casriyayntii ugu dambeysay ee Android ayaa waxaa rakibay malaayiin isticmaale
Malaayiin isticmaaleyaal ah ayaa ka rakibay barnaamij basaasnimo ah dukaanka Play Store oo ballanqaaday casriyayntii ugu dambeysay ee Android, sida uu sheegayo Zscaler.
Sidee loo kaydiyaa WhatsApp ku sheekaysiga faylka qoraalka
Kadibna waxaan ku sharxayaa shan daqiiqo gudahood sida loo sameeyo nuqul nuqul ah WhatsApp chats feyl qoraal ah
Tabobarka Fidiyowga: 3 Siyaabood oo dib loogu kaydin karo WhatsApp dibedda (Waxaa lagu sharxay shan daqiiqo)
Casharka fiidiyowga ee wax ku oolka ah ee Android kaas oo shan daqiiqo gudahood aan ku sharxayo 3 dariiqo oo dibedda loogu kaydin karo WhatsApp.
Maanta barnaamijka 'Androidsis' waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho ay la socdaan qaar ka mid ah codsiyada amniga ugu fiican ee qalabkaaga Android
Warbixintii ugu dambeysay ee Nokia waxay daaha ka rogtay in 400% ay kordheen infekshannada khaldan, inta badanna aaladda Android
Nokia ayaa daabacday warbixinteeda cusub ee "Halista Sirdoonka Warbixinta" taas oo shaaca ka qaaday koror aad u weyn oo ku saabsan infekshinka furin ee Android.
Sawirrada Google waxay dardargeliyaan kaydinta xaaladaha isku xirnaanta daciifka ah
Sawirada Google waxay kudhisan yihiin laba astaamood oo cusub oo xawaareynaya kaydinta iyo ikhtiyaarka la wadaagi karo marka isku xirnaanta internetku daciifo
Samsung waxay bil kasta siin doontaa cusbooneysiinta amniga taleefannada casriga ah ee bilaashka ah ee Mareykanka
Ka dib 18 bilood oo ballanqaadyo ah, Samsung ayaa ugu dambeyn sii deyn doonta cusbooneysiinta amniga bil kasta ee taleefannada casriga ah ee laga furay Mareykanka
Nest wuxuu diyaariyaa cusbooneysiin ku saabsan alaabteeda amniga
Nest waxay diyaarineysaa cusbooneysiin ku saabsan buugeeda alaabada amniga guryaha ee casriga ah ee la sii deyn doono deyrta soo socota
Windowsware-ka waxaa lagu ogaaday in ka badan boqol barnaamijyada Android ah
Shirkadda amniga ee Palo Alto Networks waxay ogaatay in khayaano uu ku faafayo 132 barnaamijyada Android ee laga abuuray gudaha Indonesia oo ay sameeyeen horumariyeyaal kala duwan
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo qaabeeyo taleefankaaga si ay xaalad deg deg ah nooga caawiyaan inaan la xiriirno xiriiriyaha aan ka dooneyno ajandaheena.
Apple waxay ugu baaqeysaa adeegsadayaasheeda inay cusbooneysiiyaan iOS 10.2.1 cillad dhanka amniga ah oo daran awgeed
Apple wuxuu ugu yeeraa dhamaan isticmaaleyaasheeda macruufka ku shaqeeya nidaamka cusbooneysiinta degdega ah ee iOS 10.2.1 cillad dhanka amniga ah oo daran awgeed.
Google wuxuu soo bandhigayaa G Suite Enterprise, oo leh hagaajinta amniga iyo maamulka
Google wuxuu hirgaliyaa heer cusub oo ah shirkad ku jirta G Suite oo lagu daro sifooyin amni iyo maamul wanaagsan oo cusub oo wanaagsan
DIGNIINKA ANDROID !! HummingBad mar kale ayey weeraraysaa markanna si toos ah ayey ugu soo dhuumaneysaa Google Play Store
Digniintan cusub ee Android waxaan uga hadlaynaa HummingBad, oo ah khayaano si toos ah ugu dhex dhuuntay Play Store isla markaana laga helay 20 barnaamij.
Sida loo ilaaliyo barnaamijyada ku rakiban barnaamijkeena Android shaqsi ahaan ... ama maya
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo ilaaliyo barnaamijyadaada codsi bilaash ah, bilaa xayeysiis iyo iyada oo aan la iibsan app-ka kaas oo heer qoys si aad u wanaagsan ugu socda.
Facebook ayaa hadda bixisa nabadgelyo dheeri ah oo leh taageerada furaha amniga USB
Cusboonaysiin weyn oo loogu talagalay amniga xisaabaadka oo ay taageerayaan Facebook furayaasha amniga USB ee u oggolaanaya in lagu daro lakab dheeri ah.
Dhismihii ugu dambeeyay ee fikradda 'Xperia X' waxay keentaa habayn habeen iyo balastarro nabadgelyo
Sony waxay ku dartay noocii ugu dambeeyay ee fikradda 'Xperia X Concept' inay dhisaan qaab habeen cusub ah oo yareynaya iftiinka buluuga ah ee akhriska wacan
Google wuxuu sharxayaa sida Android ay u ogaato khayaanada kahor intaysan faraha ka bixin
Kahor intaanay faraha ka bixin, Android waxay ogaataa khayaanada iyada oo ay ugu wacan tahay qiyaasta 'DOI metric' ee ay maanta Google sharraxday.
Hindisaha Muhiimka ah ee daahfurnaanta Google ayaa looga golleeyahay in lagu wanaajiyo amniga sirta dadweynaha
Furfurnaanta Furaha waa hindisaha Google kaas oo ujeedkiisu yahay in lagu hagaajiyo aqoonsiga furayaasha sirta dadweynaha
'Albaabka dambe' ee WhatsApp wuxuu u oggolaanayaa basaasidda farriimaha sirta ah
Wargeyska The Guardian wuxuu xaqiijinayaa in gadaal WhatsApp-ka wali la heli karo markii la helay bishii Abriil ee sanadkii hore.
Iska jir been abuur Super Mario Run APKs, waxay xadaan macluumaadka bangiga
Super Mario Run wuu imaan lahaa, laakiin in kastoo ay jiraan qaar fursad u qaata inay daabacaan APK-yada ay ku jiraan malware.
Ma yihiin nadiifiyeyaal ama nadiifiyeyaal otomatig ah oo loo yaqaan 'Android' runti lama huraan?
Haddii aad waligaa naftaada weydiisay su'aasha ah in nadiifiyeyaasha otomaatiga ah ee loogu talagalay Android ay dhab ahaantii lagama maarmaan yihiin, waa kan ra'yigayga daacad ah
Android 7.1.1 ayaa imanaya Nexus oo leh shaashadda amniga ee 5-ta Diseembar
Android 7.1.1 Nougat ayaa bilaabi doonta in loo meeleeyo qalabka Nexus iyo Pixel horaanta bisha Diseembar, kuna beegan balastarka amniga ee loo qorsheeyay
Dhimashada Rita Barberá waxay dib u soo nooleyneysaa been abuurkii la sheegay ee viruska lagu eedeeyay ee qoob ka ciyaarka Rita Barberá
Waxaan kuu sheegeynaa runta oo dhan oo ku saabsan fekerka fiidiyowga ee loo yaqaan 'Rita Barberá' oo fiidiyoow ah oo ku faafaya sida dabka duurka WhatsApp.
Iska jir heshiisyada Jimcaha Madow
Kahor intaadan bilaabin jimcaha madow, maskaxda ku hay inay ku siin karaan koofiyad. Ka fikir waxa aad u baahan tahay oo si fiican u eeg qiimaha ka hor dalabyada.
Maanta waxaan ku barayaa sida loo kaydiyo sawirrada ku saabsan Android, sawirrada iyo farriimaha qoraalka ah ee loogu talagalay gudbinta nabdoon ee loo maro emaylka ama barnaamijyada farriimaha.
Sida loo xiro Android-kaaga si badbaado leh oo qufulka cunugga looga hortago
Quful aad Android si ammaan ah iyo qufulka anti-ilmaha si looga hortago jeestay aan la rabin on terminal ama si xun u isticmaalka by kuwa yaryar ee guriga.
Sida loo siiyo amnigaaga Android
Maanta waxaan ku tusayaa sida loo siiyo amnigaaga Android adoo ka xiraya codsiyada shaqsi ahaan iyo ka hortagga gelitaanka goobaha Android.
Khatar cusub oo ka timi virus kale oo computer sida «Mirai»
Weerar cyber-cusub oo xitaa ka awood badan virus-ka Mirai ayaa dhow. Khubaradu waxay yiraahdaan internetka waxyaabaha waa albaabka laga soo galo
Sarkaalka amniga u qaabilsan Google wuxuu ku andacoonayaa in Pixel-ka uu u suganyahay sida iPhone
Madaxa amniga ee Google ayaa sheegay in Pixel iyo iPhone ay yihiin kuwo siman marka laga hadlayo amniga qalabka mobilada.
Waxaan kala hadalnay labo khabiir dhanka amaanka ah wax ku saabsan Androidware-ka
Waxaan la sheekeysaneynaa Josep Albors iyo Raphael Labaca, khubaro dhanka amniga iyo xumaanta ah kuwaasoo indhaheena u furi doona muhiimada ay leedahay antivirus-ka Android
Digniinta Android: Iska jir fariimaha PayPal, laga yaabee inaysan ka imaan PayPal
Ka taxaddar farriimaha Paypal maadaama ay noqon karaan Phishing ama farriimo been abuur ah oo ujeeddada keliya laga leeyahay ay tahay in la xado xogtaada sida furaha sirta ah iyo kuwa kale.
Xaqiijinta Windows Hello ayaa imaan karta Android
Ujeedada Microsoft ee Windows Hello ee qalabka Android waa inaad ka gali karto kombuyutarkaaga adoo wata taleefankaaga casriga ah
Macno malahan waxaad sameyso, Android had iyo jeer waxay raadineysaa goobtaada
Xitaa haddii aad xididdo ama tirtirto Khariidadaha Google, barnaamijka Google Play Store wuxuu si joogto ah ula socdaa goobtaada
Sida loo sameeyo keyd sawirradaada iyo fiidiyowyada leh labada adeeg ee ugu fiican xilligan
Si aad u kaydiso sawiradaada iyo fiidiyowyadaada, waxaa jira laba adeeg oo bixiya waxqabad weyn: Dropbox iyo Google Photos.
Motorola waxay xaqiijineysaa inaysan u sii deyn doonin qalabkeeda billaha ah qalabka wax lagu xiro
Motorola ayaa sheegtay in aysan bil kasta ku cusbooneysiin doonin Moto-ga ay ku baareyso amaanka Google isla markaana ay ku sii deyn doonto cusbooneysiinta qalabka.
$ 50 BlackBerry DTEK299 ayaa Lagu Dhawaaqay, Idol 4-Dlool Amniga-Diirada Saaraya
Haddii aad raadineyso taleefan ay ka go'an tahay amniga iyo asturnaanta, BlackBerry DTEK50 waa mobiil ku habboon in lagu ilaaliyo xogtaada.
ANDROID ALERT !!, xogtaada Android waxay qatar ku jiri kartaa markaan batteriga ku shubno
Maanta waxaan ku siineynaa talooyin dhowr ah si xogta ku jirta Android-keedu aysan khatar ugu jirin marka aan ka qaadno bateriga terminal-ka PC ama MAC.
INDHO !! BlackMart ayaa si dhuumaaleysi ah ugu soo galay Play Store hoostiisa magaca BlackMart3 oo horeyba u lahaa 500.000 rakib
Qaylo-dhaan ayaa laga soo saarayaa bulshada Android marka ay arkaan godka amniga ee Google Play marka BlackMart3, oo ah dukaan lagu soo dejiyo barnaamijyada lacag-la’aanta ah ee bilaashka ah, ayaa si dhuumaaleysi ah ku soo galaya.
Degdegga Google waa hab cusub oo xaqiijin laba-tallaabo ah oo loogu talagalay Android iyo iOS
Degdegga Google waa hab cusub oo loogu talagalay xaqiijinta 2-tallaabo ah oo si fudud uga dhigeysa hubinta koontadaada mid fudud.
Facebook wuxuu noo basaasayaa makarafoonka mobilka
Ma ogtahay in sida uu sheegayo Kelli Burns Facebook uu noo basaasayo makarafoonka mobilkayaga ama casrigaaga mahadnaq joogto ah oo firfircoon?
Google wuxuu maalin kasta baaraa 6.000 bilyan oo barnaamijyada Android-ka ah ee loogu talagalay khayaanada
Google ayaa daabacday warbixinta sanadlaha ah ee amniga taas oo ay ku sheegayso inay iska baarto 400 milyan oo terminal maalin kasta iyadoo la raadinayo malware
Sida loo kaydiyo Samsung-kaaga adigoo isticmaalaya Smart Switch
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo sameeyo keyd Samsung ah adoo adeegsanaya Smart Switch, codsi ay sameysay Samsung oo sahli doona shaqadeena.
Hadda waxaad ku sameyn kartaa nuqul gacan qabasho ah Sawirada Google
Laga soo bilaabo cusbooneysiinta cusub ee Sawirada Google waxaad hadda ka sameyn kartaa dib u habeynta dhammaan sawiradaada barnaamijka
Kaftanka caanka ah ee jeexjeexa Apple-ka Apple-ka kana dhiga mid aan waxtar lahayn illaa uu batterigu ka dhammaado
Kaftan sheegasho ah oo nuujinaya Apple-ka iPhone-ka isla markaana ka dhigaya mid aan waxtar lahayn illaa iyo inta batteriga terminal-ka ay dhibaatadu ka dhammaatay
Habka Nabdoon ee Android. Maxay tahay maxaase loogu talagalay
Maanta waxaan dooneynaa inaan kuu sheegno wax kasta oo isticmaalaha Android ah inuu ogaado oo uu ka ogaado waxyaabaha ku saabsan “Android Safe Mode”.
Si nabad galyo ah ula sheekayso oo xogtaada amaan ku xafid adigoo u mahadcelinaya Signal Private Messenger, Edward Snowden oo ah WhatsApp aamin ah
App-ka ay khubaradu u tixgeliyaan inuu yahay sheekada ugu nabdoon taariikhda gaaban ee isgaarsiinta cusub ama WhatsApp-ka aaminka ah ee Edward Snowden.
Digniinta Android! Daabacaha 3D wuxuu dhaafi karaa kantaroolka faraha
Daraasad cusub ayaa muujisay in daabacaadaha 3D aad ku heli karto faro been ah oo aad ku kadsoomayso akhristayaasha casriga ah ee maanta.
Sida loo abuuro kamarad amnigaaga u gaar ah oo adeeg cusub u siinaya Android-kaaga hore. Tallaabo tallaabo tallaabo video ah
Maanta waxaan ku barayaa qaab aad u fudud oo aan hal euro ku bixin, sida loo abuuro kamarad noo gaar ah
Ka taxaddar farriinta kugu martiqaadeysa inaad kiciso wicitaannada fiidiyowga ee WhatsApp !!. WAA GOTCHA !!
Fariintan oo kugu martiqaadeysa inaad dhaqaajiso wicitaanada fiidiyowga ee WhatsApp waa khiyaano ama khiyaano guud. Weligaa ha gujin cinwaanka ku lifaaqan !!
Codsiga ugufiican ee looga horjoogsado codsiyada marinka aan la fasaxin
Codsiga ugufiican ee looga horjoogsanayo codsiyada marinka aan la fasaxin sidaasna looga ilaaliyo asturnaantayada kuwa ku soo xadgudbay ama si qaldan u adeegsanaya
Waxaad ka mid tahay kuwa badan ee dhibaatadu saameysey ee u maleynaya in Wi-Fi-kooda la xado. Hagaag, xadida Wifi ayaa dhamaanaysa
Instagram waxay ku dareysaa lakab dheeri ah oo amaan ah xaqiijinta laba qodob
Amniga ayaa noqonaya wax muhiim u ah barta Instagram oo qaadata laba qodob oo xaqiijin ah laga bilaabo maanta.
LG Dayactirka Nuglaanshaha Saameynaya Malaayiin Telefoon G3 ah
Malaayiin G3 ah ayaa ah kuwa ay saameeyeen dayacanka ay LG horey u xallisay
Sida looga ilaaliyo Android-kaaga shaashadaha.
Qoraalkan cusub waxaan kugula talineynaa barnaamij bilaash ah oo kaa caawin doona inaad ka ilaaliso Android-kaaga shaashadda.
XNSPY, oo ah barnaamijka basaasida ugu wanaagsan ee casrigaaga
XNSPY waa barnaamij basaas ah oo loogu talagalay qalabkaaga Android kaas oo aad kula socon karto dhaqdhaqaaqa carruurtaada oo aad ku ilaalin karto ammaan
5ta khiyaanada loogu hadal haynta badan yahay iyadoo loo marayo WhatsApp sanadkii 2015
WhatsApp wuxuu ahaa isha ilaha khiyaanada moobiilka sanadka oo dhan. Maanta waxaan falanqeyneynaa kuwa ugu caansan sanadka 2015.
Iska jir fariinta soo degsashada emoticon ee kirismaska ​​ee WhatsApp, waa khiyaano kale !!
Iska jir fariinta soo degsashada emoticon ee kirismaska ​​ee WhatsApp, waa khiyaano kale
Shaashadda taleefannada gacanta ayaa ah isha bakteeriyada, waxaan ku tusineynaa sida saxda ah ee jeermiska loogu diro shaashadda qalabkaaga “terminal Android”
Maanta, ka dib daraasad dhowaan ay soo saartay UB, waxaan ku tusineynaa sida loo nadiifiyo shaashadda kumbuyuutarkaaga Android si sax ah.
Digniinta Whatsapp! Khiyaano cusub oo xadda € 20 asbuucii
In kasta oo mowjad cusub oo khiyaanooyin WhatsApp ah ay bilaabeen dhowr toddobaad ka hor, haddana mid cusub ayaa ka xayuubiya dadka isticmaala ilaa 20 euro usbuucii.
Aniga igu saabsan Google, Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan astaanta guud ee Google
Aboutme Google wuxuu noo ogolaanayaa inaan si buuxda u xakameyno astaanta guud ee Google, astaan ​​ay leeyihiin dhammaan dadka isticmaala Android, Gmail, iwm. In kastoo qaar badani aysan aqoon.
DIGNIINKA ANDROID !!. Iska jir fariinta "Sidee ayey u qurux badan yihiin emoticons-ka cusub ee WhatsApp", waa khiyaano
Fariinta iska ilaali Sida ay u qabow yihiin emoticons-ka cusub ee WhatsApp khayaanada.
Dhinac saddexaad ama aan rasmi ahayn USB Type-C isku xirayaasha ma aaminbaa?
Injineer Google ayaa sare u qaadaya feejignaanta ku saabsan isku xirayaasha nooca USB Type-C ee aan asalka ahayn iyo ammaankooda mobilada
360 Security, oo ah antivirus kaas oo hagaajiya nidaamka
360 Security waa wax walba oo loo wada dhan yahay oo loogu talagalay amniga casriga casriga ah ee 'Android' wuxuuna bedel weyn u noqon karaa kuwa kale
Khubarada Google waxay ka helayaan 11 ceebaha amniga ee Galaxy S6 Edge toddobaad gudihiis
Xagga Galaxy S6 wuxuu leeyahay 11 cilladood oo xagga amniga ah oo laga helay Project Zero hal toddobaad oo keliya markii la raadinayay.
Google wuxuu sii daayaa Sawirada Cusbooneysiinta Amniga ee Noofambar Noocyada Nexus
Google ayaa daabacday cusbooneysi bille ah si loo xalliyo dhibaatooyinka xagga amniga ee aaladaha Nexus, qaabkan ayay uga dhigayaan kuwo amnigooda ka fiican.
Threema, oo ah barnaamij fariin ah oo u ololeeya amniga
Threema waa codsi si toos ah diiradda u saaraya amniga iyo asturnaanta isticmaaleyaasha, sidaas darteedna isaga fogeynaya WhatsApp.
Qalabka cusub ee Google si ay kuu siiso kantarool badan adiga kuu gaarka ah iyo amnigaaga
Google waxay bilaabeysaa "Koontadayda Google" si ay u siiso isticmaalaha qalab kala duwan oo ku saabsan asturnaanta iyo amniga qalabkooda Android
Sida loo kaydiyo barnaamijyada iyo xogta adigoon ahayn isticmaale xidid
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo isticmaalo Kaarboon-ka Android-ka si aad ugu kaydiso codsiyada iyo xogta adigoon isticmaale Root ahayn
Sida looga fogaado virus-yada ku jira android
Waxaan haynaa talaabooyin taxane ah oo aan qaadayno si aan u ilaalino taleefankeena gacanta ama kaniiniga ah mid aad u amaan badan si looga fogaado soo gelida fayrasyada
WhatsApp wuxuu jebiyaa xiriirkiisa Google Drive: macsalaamayn keydinta daruuraha
WhatsApp, tallaabo lama filaan ah, ayaa tirtirta kaydinta daruuraha.
Sida Loogu Keeno Codsiyada iyo Xogta leh Titanium Backup
Maanta waxaan sharxayaa sida loo abuuro keydinta codsiyada iyo xogta ku saabsan Android iyadoo la adeegsanayo Titanium Backup.
Kaydinta WhatsApp ee Drive-ka wali ma shaqeyneyso
Dhibaatooyinka xagga farsamada qaarkood waxay sababaan gurmad WhatsApp si aad u waddo wali ma shaqeyneyso
[APK] WhatsApp waxay kuu oggolaaneysaa inaad nuqullo nuqul ah ka sameysid Google Drive
Ragga ka dambeeya horumarka boqorka farriinta, WhatsApp, ayaa u oggolaanaya kaydinta Google Drive.
Ka ilaali Android-kaaga inaad jabsato barnaamijka Track Android Hacker
Maanta waxaan soo bandhigeynaa codsi ku saabsan amniga Androids-keena oo loo yaqaan 'Track Android Hacker'.
Malaayiin isticmaaleyaal ah ayaa halis ugu jira sida Google u dhammeeyo WebView cusboonaysiinta amniga ee Android 4.3 iyo ka hooseeya
Laga soo bilaabo Forbes waxaa looga digayaa inay jiri karto halista weerar sababtoo ah la'aanta taageerada Webview ee Android 4.3 ama ka hooseeya Google
Akhristaha irisku wuxuu gaadhayaa taleefannada gacanta isagoo u ah dhammaystir xagga amniga ah
Teknolojiyada cusub ee ku saleysan filimada amniga iyo sayniska sayniska ayaa la wareega taleefannada casriga ah sida akhristaha iris ee Viewsonic V5.
Sida si sax ah loogu dejiyo gurmad toos ah sawirada Google+
Waxaan kaa caawineynaa inaad si sax ah u habeysid keydka otomaatiga ah ee sawirada Google+ si aysan u jirin wax dhibaato ah
Jilicsanaan kale oo cusub oo xagga amniga ah ee dirista farriinta deg-degga ah ayaa noo oggolaaneysa inaan jebinno WhatsApp-ka annagoo si fudud ugu dirayna farriin qoraal ah 2KB oo wadarta miisaanka ah
Maanta waxaan soo bandhigayaa codsi fudud laakiin faa'iido leh oo naga caawin doona inaan ka dhigno keyd IMEI-ka bartayada 'Android terminal'
[Fiidiyow] Sida loo sameeyo keydka nandroid ee keydkeena talaabo talaabo ah
Sida loo sameeyo gurmad nandroid gurmad ah talaabada talaabada ah ee Android. Casharro muhiim ah.
Milicsiga dareenka guud ee su'aasha ah in barnaamijyada lagu hagaajinayo Android ay run ahaantii waxtar leeyihiin oo loo baahan yahay.
Eeg gacanta koowaad qalabka ku xiran koontadaada Google
Baro gacanta koowaad aaladaha ku xiran koontadaada Google laga bilaabo maanta mahadnaqa qalab cusub oo Google ah
AlertCops, si toos ah loogu wargaliyo ciidamada amniga ee gobolka xaalad deg deg ah
AlertCops waa codsi cusub oo Wasaaradda Arrimaha Gudaha ah oo naga caawinaya inaan uga digno ciidamada ammaanka ee kala duwan xaalad deg-deg ah ama nabadgelyo.
D-Vasive; codsi si looga fogaado basaasyada ku shaqeeya Android-kaaga
Haddii aad ka mid tahay kuwa aad uga walwalsan basaasidda taleefankaaga, waa inaad ku rakibtaa D-Vasive, abuurkii ugu dambeeyay ee ka yimid McAfee.
Daabacaadda Dahabka ah ee WhatsApp #Bulo de moda ee Shabakadda
Maanta waxaan kaala hadlaynaa #boob ama #ram cusub ee WhatsApp Daabac Daabac cusub oo WhatsApp ah oo ku faafaya sida dabka ka kaca internetka.
[APK] PullWifi, ku hel khadka Wi-Fi bilaash ah router badan oo iswaafajiya
PullWifi waa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay Android, taas oo naga caawin doonta inaan helno xiriir Wi-Fi oo bilaash ah.
AppWererabbit Backup waa barnaamij muhiim u ah barnaamijyada keydinta oo ay ku jiraan xogtooda
AppWererabbit Backup wuxuu na siiyaa xal fudud si loo abuuro nuqullo nuqul ah barnaamijyada iyo xogta barnaamijyada lagu rakibay Android-keena.
Sida loo isticmaalo Maareeyaha Aaladda Android, oo ah barnaamij bilaash ah oo naga caawiya inaan helno Androidkeenii lumay ama la xaday.
FBI-da ayaa ku dhaleeceyneysa Apple iyo Google in ay sifiican u sirtaan taleefoonadooda
FBI waxay dooneysaa inay hesho taleefanada leh Apple iyo Google encryption cusub ee iOS 8 iyo Android L